काठमाडाैं। कार्ल मार्क्स, जसकाे नाम नसुन्ने संसारमा सायदै हाेलान्। मार्क्स आफैंमा दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रका जीवन्त ठेली हुन्। अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र र इतिहासका क्षेत्रमा उनले पुर्याएकाे याेगदान अतुलनीय छ।
मार्क्सका केही यस्ता भनाइहरु छन्, जसले संसारलाई भलाइकाे दुनियाँमा डाहाेर्याउन मार्गदर्शन गरेका छन्। यहाँ उनका पाँच भनाइ उल्लेख गरिएकाे छ, जसले संसार बदल्न याेगदान गरेका छन्।
बालबालिकालाई पढाउनुपर्छः केही मानिसहरूले यो कुरालाई एउटा भनाइका रूपमा मात्र लिन सक्छन्। तर सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखिरहेका बेला मार्क्सले बालश्रमको चर्चा गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि संसारमा १० मध्ये एक बच्चा बालश्रमिक छन्। धेरै बालबालिकाहरू कलकारखाना छाडेर विद्यालय जानुमा मार्क्सको ठूलो देन छ।
‘द ग्रेट इकोनोमिस्ट’ पुस्तककी लेखिका लिण्डा यू भन्छिन्, “सन् १८४८ मा जारी मार्क्सको घोषणापत्रमा बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निःशूल्क शिक्षा दिइनुपर्ने कुरा १० बुँदामध्ये एउटा थियो। कलकारखानामा हुने बालश्रममाथि रोक लगाउनुपर्ने कुराको पनि त्यसमा चर्चा गरिएको थियो।”
आफ्नो जिन्दगीको मालिक आफैँ हुनुपर्छः के तपाईं हप्ताको सात दिन काम गर्नुहुन्छ ? कामका बेला खाजा/खाना खाने समय लिनुहुन्छ ?एउटा निश्चित उमेरपछि तपाईं सेवा निवृत्त हुन र निवृत्तिभरण पाउन चाहनुहुन्छ ?
यदि तपाईंको जवाफ सकारात्मक छ भने तपाईं मार्क्सलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक माइक साभेज भन्छन्, “पहिला पहिला लामो समयसम्म काम गर्न भनिन्थ्यो। तपाईंको समय तपाईंको हुँदैन थियो र तपाईं आफ्नो जिन्दगीका लागि सोच्न पाउनु हुँदैन थियो।”
पुँजीवादी समाजमा मान्छेलाई बाँच्नका निम्ति उनीहरूको श्रमलाई कसरी बाध्यता बनाइनेछ भन्नेबारे मार्क्सले लेखेका थिए। उनका अनुसार मानिसहरूलाई अधिकांश समय उनीहरूको परिश्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिइने गरिएको थिएन र उनीहरूमाथि शोषण गरिएको थियो।
मार्क्स चाहन्थे मान्छेको जिन्दगीमाथि उसकै अधिकार होओस्, मान्छेको जीवन अरू कुराभन्दा सर्वोपरी होओस्। उनी चाहन्थे मान्छेहरू स्वतन्त्र होऊन् र मान्छेभित्रको सिर्जनात्मक क्षमताको विकास होओस्। साभेज भन्छन्, “वास्तवमा मार्क्स भन्छन् हामीले हाम्रो जीवन यसरी जिउनुपर्छ कि जसको मूल्याङ्कन कामले नगरियोस्। एउटा यस्तो जीवन जसको मालिक हामी आफैँ होऊँ, जहाँ हामी आफैँले यो कुराको निर्धारण गर्न सकौँ कि हामी कसरी जिउन चाहन्छौँ। आजकाल यही सोचका साथ मानिसहरू जिउन चाहन्छन्।”
रूचि अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्छः आफ्नो मनले भनेको काम गर्दा मान्छेलाई खुशी मिल्छ। तर आफूले चाहे बमोजिमको काम नहुँदा मान्छेले दत्तचित्त भएर गर्न सक्दैन र ऊ निराश हुन्छ। यी कुराहरू अरूले नभइ स्वयं मार्क्सले भनेका हुन्। सन् १८४४ मा लेखेको आफ्नो पुस्तकमा मार्क्सले काममा पाइने सन्तुष्टिलाई मान्छेको भलाइसँग जोडेर हेरेका थिए।
तत्कालीन समयमा यस्तो कुरा गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति थिए। उनको तर्क थियो हामी आफ्नो अधिकांश समय काममा खर्चिन्छौँ। अतः यो आवश्यक छ कि आफ्नो कामबाट हामीलाई खुशी मिलोस्।
भेदभावको विरोध गर्नुपर्छः यदि समाजमा कोही खराब छ, यदि तपाईंलाई लागेको छ कि कसैप्रति अन्याय, भेदभाव वा गलत भइरहेको छ भने तपाईं त्यसको विरोध गर्नुस्। तपाईं संगठित भएर विरोध गर्नुस् र परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्नुस्।
संगठित विरोधका कारण कैयौँ देशको दिशा बदलिएको छ। विभिन्न प्रकारका भेदभावविरूद्ध कानून बनोस्। लण्डनमा हुने मार्क्सवादी कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एक लुइस निल्सन भन्छन्, “समाजलाई बदल्न क्रान्ति आवश्यक हुन्छ। हामी समाजको राम्रोका लागि विरोध प्रदर्शन गर्छौं। यसरी सर्वसाधारणले आठ घण्टा काम गर्ने अधिकार पाएका हुन्।”
महिलालाई मतदानको अधिकार कसरी प्राप्त भयो ? यो अधिकार संसद्का कारण नभइ महिलाहरू संगठित भएर विरोधमा उत्रिएकाले पाए। काम गर्नेहरूले साप्ताहिक बिदा कसरी पाए ? मजदुरहरू संगठित भएर हड्तालमा उत्रिएकाले पाए।
सञ्चारमाध्यममाथि निगरानी राख्नुपर्छः सरकार र ठूला व्यापारिक घरानाले साठगाँठ गरे तपाईँलाई कस्तो लाग्ला ? व्यापारिक प्रतिष्ठानले तपाईँका सबै जानकारी सरकारलाई उपलब्ध गराइदिए के तपाईँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ ? १९ औँ शताब्दीमै मार्क्सले यस्तो महसुस गरेका थिए।
हुन त त्यो बेला सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन्, तथापि मार्क्स पहिलो व्यक्ति थिए जसले त्यस्तो साठगाँठको व्याख्या गरे। ब्वेनस आइरिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भालेरिया वेघ वाइस भन्छन्, “मार्क्सले त्यतिबेलै सरकार, बैंक, व्यापार र उपनिवेशीकरणका प्रमुख एजेन्टहरूबीचको साठगाँठबारे अध्ययन गरे।” उनी थप्छन्, “मार्क्सले सञ्चारमाध्यमको शक्ति बुझेका थिए। मानिसहरूको सोचाइ प्रभावित गर्नका लागि सञ्चारमाध्यम उपयुक्त माध्यम थिए। आजकल हामी झु’टा समाचारका कुरा गर्छौँ। तर मार्क्सले उहिल्यै यस्तो कुरा बताइसकेका थिए।”
मार्क्सले त्यतिबेला प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूको अध्ययन गर्दथे। उनी यो निष्कर्षमा पुगेका थिए कि गरीबहरूले गर्ने अपराधलाई सञ्चारमाध्यमले ठूलो स्थान दिन्छन् जबकि नेताहरूले गर्ने अपराधको घटनालाई दबाउँछन्।
यस्ता छन् विवाह गर्नु अघि गर्नैपर्ने ८ काम
मानिसको आँखा कति मेगापिक्सेलको हुन्छ ? यस्ता छन् आँखाबारे १८ रोचक तथ्य
माओका १६ बुँदा : कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले कसरी काम गर्ने ?